"र म जान थियो रूस"- मेक्सिकन विश्व कप मा प्रेम भेट, मेरो जीवन
«र म जान थियो रूस»- मेक्सिकन विश्व कप मा प्रेम भेट, मेरो जीवन
Posted on 09.03.2019, 21:00 By Goodsite
एक प्रशंसक को नाम द्वारा, मा आइपुगे जो रूस समर्थन गर्न राष्ट्रिय टीम को मेक्सिको मा भेट, देश- को संसारको च्याम्पियनशिप को केटी विवाह गर्ने निर्णय एक महिना पछि डेटिङ, यो पत्र लेख्छन् ।»उहाँले एक धेरै महान र आदरणीय,’ भन्छन्, रूपमा काम एक ब्यूटिशियन, म प्रतिरोध गर्न सकिएन अगाडि मेक्सिकन प्रशंसक गरे जो उनको एउटा प्रस्ताव मा लाल वर्ग मा समय को विश्व कप.
खुलासा गर्न चाहेनन्, आफ्नो नाम र बताउन अन्य विवरण पाइपिंग उपन्यास को व्याख्या, हामी कुरा गर्दै छन् बारेमा व्यक्तिगत मामिलामा, जो, यसबाहेक, हुन सक्छ द्वारा व्याख्यायित उनको. को आगमन लाखौँ मानिसहरू देशका देखि, जो धेरै काता क्षणिक मामिला संग रूसी बालिका, कारण एक गम्भीर बहस को भूमिका बारे महिला र आफ्नो अधिकार रूस मा — एक समाज अझै पनि छ जो प्रभुत्व. धेरै टिप्पणीकार आलोचना रूसी मामिलामा लागि विदेशीहरू संग, यसो भनेर तिनीहरूले कमजोर नैतिक कपडा देश र आनुवंशिक संरचना. जब विश्व कप थाले, उप रूसी संसद, सल्लाह छ रूसी बालिका जोगिन उपन्यास संग, विदेशीहरू भने पछि नौ महिना छोराछोरीलाई एक्लै हुन. थप समस्या हुनेछ, र पनि अधिक गम्भीर छ भने मानिस जसलाई त्यो प्रविष्ट हुनेछ मा एक सम्बन्ध, को एक प्रतिनिधि अर्को दौड । भन्छन् कि विश्व कप हुनुपर्छ एक जागा-अप कल लागि रूसी, पुरुष जीवन छ बस वर्ष र जसको स्वास्थ्य कमजोर छ, को प्रयोग को रक्सी र धूम्रपान ।»राम्रो आफैलाई हेर्न, त्यसैले अन्य बालिका छोड्न थिएन, — भने रीता. — विदेशीहरू एक पूर्ण विभिन्न कसरी व्यवहार गर्न एक केटी छ ।.»त्यसपछि निर्णय गर्न अपिल गर्न राहगीरों-द्वारा र उहाँलाई मदत, भए एक सुन्दर केटी भनेर तुरुन्तै आफ्नो ध्यान पक्रेको ।»त्यो मलाई भन्नुभयो देखाउन हुनेछ भनेर मलाई सही दिशा र पकड छ । म उनको आमन्त्रित गर्न भोजन, त्यो जवाफ दिए संग एक इन्कार, तर अझै पनि दिनुभयो फोन नम्बर । त्यहाँ थिएन जब एक दिन हामी देखेका थिएनन् प्रत्येक अन्य वा कुरा । यो व्याख्या गर्न कठिन छ, तर म बस प्रेम गरे,»भन्छन् जवान मानिस । केही दिन पछि, त्यो उहाँलाई भनिन्छ मा एकाटेरिनबर्ग, जहाँ उनको आमाबाबुले जीवित छ । अनुसार मेक्सिकन नातेदार को थियो विनम्र र सरल मान्छे । सम्बन्ध थिए भनेर सफल प्रशंसक पनि सम्झना निर्णायक खेलमा मेक्सिको विरुद्ध संग ब्राजील लागि यो क्वाटरमा- को संसारको च्याम्पियनशिप । को प्रस्थान पछि»अजटेक»घर उड्यो, तर केवल रूस फर्कन फेरि । दिन को अन्तिम बीच क्रोएशिया र फ्रान्स, उहाँले मास्को मा आइपुगे लागि सोध्न केटी गरेको हात, र त्यो थिएन दुई पटक लाग्छ । मान्छे पनि आफ्नो आमा थियो चेतावनी दिए बारेमा सावधानी गर्न सम्बन्ध मा रूसी.»म छु छैन एक मूर्ख मानिस । सुरुमा पनि लाग्यो कि यो थियो बस एक क्षणिक भावना देखि ज्ञान संग एक सुन्दर केटी, तर अन्ततः बुझे कि यो वास्तविक कुरा हो । जब आमा सुने के भयो थियो, यो थियो सल्लाह सावधान हुन, किनभने, उनको अनुसार, ती रूसी बेच्न सक्छन् मेरो अङ्गहरू»- एक हांसो संग भने जवान मानिस । अब लघु छैन बन्द गर्न शेयर को इतिहास बारे आफ्नो प्रेम मा एक व्यक्तिगत, प्राप्त एक ठूलो संख्या को दृश्य । केही जवान मानिस भनेर विश्वास, महिला रूस मा हरेक विदेशीले चासो छ, किनकि तिनीहरू उत्प्रेरित हुन्छन् केवल सार्न क्रम मा आफ्नो देश टाढा छ । हाँ, मलाई पनि,»एक सुन्दर कथा». रूसी बालिका छोड्न चाहनुहुन्छ आफ्नो देश, र पनि दर्जनौं छन् एजेंसियों को लागि डेटिङ जहाँ तिनीहरूले प्रदान.
— ओह, र म जान थियो रूस
— मा आउन, यो केही बात गर्न विवाह पछि मात्र डेटिङ एक महिना.
— सजिलै फेला परेन, रूप सजिलै र यो गुमाउनु
जीवनको व्यवस्था छ । — यो ठूलो छ । हाम्रो संस्कृति हो मर्ज । एन खैर, कुनै, म यो रुचि छैन. — तिनीहरूले छन् जस्तै: बस कसैलाई आफ्नो नेटवर्क मा, त्यसपछि, उहाँलाई निर्वासनमा जान गर्न. यो सबै एक भ्रम छ । हाँ यो मान्छे धेरै ठूलो नायक को सबै भन्दा हाम्रो मेक्सिकन खेलाडी ।
← मुक्त डेटिङ महिलाहरु को संयुक्त राज्य अमेरिका मा डेटिङ साइट